UN: 2,000 oo qof oo lagu dilay Soomaaliya laba sanno gudahood - BBC News Somali
Image caption Qarixii Soobe waa kii ugu dhimashada badnaa
Warbixin ay soo saartay Qaramada Midoobey ayaa lagu sheegay in tirada shacabka ku dhintay colaadda Soomaaliya ay sare u sii kacday.
Hay'adda ayaa diiwaan gelisay in ka badan 2,000 oo qof in lagu dilay Soomaaliya muddadii u dhexeysay Janaayo 2016 illaa Oktobar 2017. Sidoo kale illaa 2500 oo kale ayaa ku dhaawacantay Soomaaliya isla xilligaasi.
Warbixinta Qaramada Midoobey ayaa lagu eedeeyay laamaha amniga in ay si aan kala sooc lahayn dad u xirxiraan iyo in ay la shaqeeyaan miliishiyaad lala xiriirinayo qabaa'il, "oo xaaladda sii cakiri kara".
Qarax ka dhacay meel u dhow Tiyaatarka magaalada Muqdisho
Maqal Waa sidee xaalada dhaawacyadii qaraxii Soobe ee Turky loo qaaday?
Sawirro Sawirada qaraxa suuq ku yaal Moqdisho